Vaovao - Fampirantiana Vietnam
Tamin'ny 10 aprily, ny orinasantsika dia nankany Vietnam mba handray anjara amin'ny fampiratiana, mampiseho ireo vokatra lehibe ao amin'ny orinasa: lamba fonosana, lamba rongony, lamba vita amin'ny akanjo, ary nanome ny mpanjifa fampisehoana amin'ny antsipiriany ny vokatra sy ny herin'ny orinasa.
Hebei Ruimian Textile Co., Ltd dia orinasa miranty manokana, izay mpanamboatra matihanina lamba vita amin'ny lamba, lamba ary lamba vita amin'ny pocketing. Ny orinasa dia manenona, maty, manafatra ary manondrana varotra napetraka amin'ny iray, manana fitaovana famokarana an-trano, iraisam-pirenena mandroso izahay; Ny ankamaroan'ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Japon, Eropa, Korea, Aostralia, Azia Atsimo Atsinanana, Atsinanana Afovoany ary firenena hafa ary faritra.
Ny orinasanay dia manome ny karazan-doko volondavenona, lamba volon-doko, lamba vita amin'ny lamba sy vita amin'ny pirinty, manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa lamba fanao manokana, toy ny anti-static, waterproof, down-proof sy ny sisa.
Hatramin'ny niorenan'ny orinasa nanomboka tamin'ny 1995, ny orinasantsika dia mahazo fiderana avo lenta amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny kilasy voalohany sy ny rafi-pitantanana prefect. Androany ny mpiasa ao Ruimian dia manaraka ny politikan'ny firaisankina '' mampitombo ny firaisan-kina mampahomby '', manohy ny fanavaozana, raiso ny teknolojia ho toy ny fototra, kalitao toy ny fiainana, mpanjifa ho an'Andriamanitra, ary manokan-tena hanome anao ny kalitao, tsy misy kilema ary. ny vokatra Poly-Cara sarobidy indrindra.